मन्दिरै मन्दिरहरुको शहर विजयपुर क्षेत्र धरान - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन १३, २०७४ समय: ७:२१:५९
अधिकांश मानिसहरुलाई लाग्छ, धरानका तीनवटा मन्दिरहरु पिण्डेश्वरी, बुढासुब्बा र दन्तकाली मात्र हुन । ती मन्दिरहरु जत्तिकै महत्वका करिव ५० को हाराहारीमा अन्य मन्दिरहरु समेत सो क्षेत्रमा रहेका छन् । ‘विजयपुरलाई मन्दिरै मन्दिरले ढाँकेको छ । तर, धेरैलाई थाहा छैन ।
धरानदेखि करिव तीन किलोमिटर उत्तर पूर्वको विजयपुर धरानको श्रीपेच नै हो । धरानका पिण्डेश्वरहरु जत्तिकै महत्वको पञ्चकन्या मन्दिर पनि छ । विजयपुर क्षेत्रमा झण्डै ५० को हाराहारीमा मन्दिरहरु छन् । राणाकालीन अवस्थादेखि पञ्चायतकालीन समयमा मन्दिरहरु निर्माण गरिएका छन् । पुरातात्विक महत्वको मन्दिरहरु केही जिर्णोद्धार अवस्थामा छन् । पिण्डेश्वर मन्दिर परिषर मात्रै १६ वटा अन्य मन्दिरहरु रहेको विजयपुरका जानकार प्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्मा बताउँछन् । विजयपुर क्षेत्रमा गादी गणेश मन्दिर, पिण्डेश्वर मन्दिर परिषरमै रहेको बालाम्बा पिण्डेश्वर भगवतिको मन्दिर, त्यसका अलवा भीमसेन मन्दिर, विद्यवासिनीदेवीको मन्दिर, साहिली बाहिनी मन्दिर, गुप्तवासिनी देवी, राधाकृष्ण मन्दिर, हनुमान मन्दिर, श्रीराम मन्दिर, लक्ष्मीनाराण मन्दिर, बलभद्रेश्वर शिवालय, सिंहदेवी भगवती मन्दिर छन् ।
त्यस्तै चन्द्रेश्वर शिवालय, सिद्धिविनायक गणेश मन्दिर, सिद्धेश्वर महादेव, सिंहवाहिनी मन्दिर, शिव मन्दिरलगायतका मन्दिरहरु धरानको विजयपुर क्षेत्रमा मात्रै छन् । जुन मन्दिरहरु अस्तित्वमा भए पनि स्थानीय भक्तालूहरुसमेतले वास्ता गर्ने गरेका छैनन् । ‘सम्प्रदाय विशेष मन्दिरहरु भएकाले पनि चहलपहल केही कम हुने गरेको मात्रै हो ।’ धरानमा हालै निर्माण गरिएको मुगादेवी मन्दिर पनि अस्तित्वमा छ । विजयपुरको आफ्नै महत्व छ । यसको ऐतिहासितालाई हेर्ने हो भने धरान सहर निर्माण हुनु पूर्व नै यहाँ बसोबास भएको इतिहासले प्रमाणित गर्ने प्रा.डा. शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार विजयपुर झण्डै २ सय वर्षदेखि मानववस्ती बसेको हुन सक्ने सम्भावना छ । ‘किनकी १८३१ मा त पृथ्वी नारायण साहसँग लिम्बुवानका राजाहरुको सम्झौता भएको इतिहास छ ।’
‘विजयपुर धरानको आर्थिक मेरुदण्ड नै हुन्छ ‘तर, प्रचार प्रसारको कमी छ ।’ खाली धरानमा पिण्डेश्वर, दन्तकाली र बुढासुब्बामा मात्रै वर्षेनी मान्छेहरुको लर्को लाग्ने गरेको छ । हरेक वर्षको श्रावणमा पिण्डेश्वरमा जल चढाउनेहरु झण्डै तीनदेखि चारलाखको हाराहारीमा पुग्छन् । ‘हिन्दु पर्यटकहरुलाई मात्रै भित्रयाउन सक्ने हो भने धरानको विकास र पर्यटनले फडको मार्नेमा कुने दुईमत नहोला ।